Speed ​​Reducer & Gearbox Manufacturer, mpamatsy, Factory - reducers, reducers worm, worm gearboxes, planetary gearboxes, speed reducers, variators, helical gear, sprial bevel gears, gearboxes pertanian
Ny reducers hafainganana dia fiaran-dalamby eo anelanelan'ny motera sy ny masinina. Ny tanjon'ny reducer hafainganana dia ny hampihenana ny rpm izay ampitaina amin'ireo teboka roa ireo. Maka reducers hafainganana ny herinaratra noforonin'ny motera (ny fampiasa) ary ampitomboina. Faharoa, mihena ny hafainganam-pandeha, toy ny anarany ny hafainganana (ny output rpm) ny fidirana ka ny output no hafainganam-pandeha marina.
Ny teny hoe "boaty fitifirana" dia teny mahazatra fotsiny ho an'ny fiaran-dalamby eo anelanelan'ny motera sy ny masinina. Noho izany, ny boaty reducers hafainganam-pandeha rehetra.
Na izany aza, tsy ny boaty rehetra no mampihena ny hafainganan'ny fampidirana. Na dia tsy mahazatra aza dia azo ampiasaina fitaovana ny boaty boaty mba hampitomboana ny hafainganan'ny fampidirana. Hatramin'izao, ny karazan'orinasa mahazatra indrindra dia ny reducer hafainganana, saingy tsy mety ny milaza hoe ny boaty gearbox rehetra dia mihena haingana.
Reducers hafainganam-pandeha kankana
Reducers kankana manokana ho an'ny Greenhouse
Worm mihena Inch Dimension Series UY
Reducers Inch Dimension Wpa
Reducers Inch Dimension wps
Reducers Inch Dimension wpx
Reducers Inch Dimension WPDA
Reducers Inch Dimension WPDS
Worm reducers Inch Dimension WPDX